Banyere Anyị - Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd.
Pallet egwu System
Nhọrọ pallet egwu
Ụgbọala na pallet egwu
Nnọọ warara wara wara pallet egwu
Ugboro abụọ Deep pallet egwu
Gravity Flow pallet egwu
Push Back pallet egwu
Mezzanine Ft pallet egwu
Cantilever pallet egwu
Nchekwa Shelving System
Shelving Rivet enweghị Boltless
Light ọrụ Shelving
Long na-adịru Shelving
Slotted n'akuku Shelving
Waya ntupu Products
Waya ntupu Decking
Plastic Nchekwa Bin
Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd. e guzobere na 2001. Anyị na-a emeputa na soplaya nke a dịgasị iche iche nke ulo oru na azụmahịa nchekwa egwu na usoro na ihe na-ejizi equipments.
Anyị ipuiche oge, imewe, na echichi nke irè erughị ala na nchekwa ngwọta; ezitekwara nke dị iche iche ihe na-ejizi ngwá ọrụ dị iche iche ulo oru na azụmahịa ndi nakwa dị ka onwe & ọha oru n'elu uwa nile.
Anyị na-eji elu mma ihe nyere site Shanghai Baosteel Group (nnukwu ígwè ọrụ na China). Anyị nwere elu auto electrostatic powder sere akara na 2 tupu ọgwụgwọ ihicha usoro.
Na Spieth, anyị kwere na-eweta ngwaahịa na akụrụngwa na-ekwe nkwa na ndị kasị elu larịị nke àgwà nke nnabata na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụkpụrụ. Anyị na-kweere na ọ bụla ahịa na oru ngo, n'agbanyeghị size ma ọ bụ uru, anyị ekwesịghị ngụkọta nkwado si atụmatụ site na anyị magburu onwe mgbe-sales ọrụ.
Iji mma ọrụ ahịa anyị, anyị guzosie ike tupu ire na mgbe-ire ọrụ na mere mgbalị-enye ya ahịa na ndị magburu onwe, na-adọ na-eme n'ọdịnihu na-abara oru ọrụ. Spieth igbo iche iche mkpa nke ndị ahịa anyị, melite ahịa afọ ojuju, iru ogologo oge mmeri-mmeri onye mmekọrịta gị!
Nkà ihe ọmụma anyị bụ inyere gị aka iji nwee nke nkwakọba ohere, mbuli elu na nchekwa data ikike itinye n'ọrụ, ndọtị nkwakọba nchekwa ike. Anyị na-ebelata-akwụ ụgwọ, ọ bụla anụ ọhịa ọ bụla na dime na kachasị na engineered Ngwaahịa.
Anyị bụ ndị a emeputa na soplaya nke a dịgasị iche iche nke ulo oru na azụmahịa nchekwa erughị ala na usoro na ihe na-ejizi equipments kemgbe 2001. ọ bụla akụkụ ị zụrụ na Spieth egwu a na-nyere na 10 afọ akwụkwọ ikike.
Ogige Tongan, Mpaghara Tongan, Xiamen, China
Ekwentị: +86 15759222268
© Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara.闽ICP备17021624号 Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
pallet egwu uprights , nkwakọba pallet ogbe , nkwakọba Nchekwa racks , foldable waya ntupu akpa , nkwakọba pallet egwu System , pallet egwu nchebe ,